Thiago Silva: Waan Ka Xanaaqay Inay PSG Lasoo Saxiixatay Ramos – Garsoore Sports
Thiago Silva: Waan…
Xiddiga reer Brazil ayay iska fasaxday kooxda Ligue 1-ka ee PSG sannadkii hore waxaana uu haatan qiray inuu ka xumaaday inay kooxdiisii hore lasoo saxiixato Sergio Ramos.
Thiago Silva ayaa qirtay in go’aankii Paris Saint-Germain ay kula soo saxiixatay Sergio Ramos ay ku reebtay “runtii murugo”, kaddib markii aan loo soo bandhigin heshiis la mid ah midka lagula soo wareegay Ramos inkasta oo labada xiddig ay isku dhow yihiin da’ ahaan.
Kabtankii hore ee Real Madrid Ramos ayaa kamid ah dhowr saxiix oo heer sare ah oo uu xagaagan usoo wareegay Parc des Princes, iyadoo kooxda Ligue 1-ka ay dooneyso inay xoojiso rajadooda ah inay ku guuleystaan tartamada Yurub.
Si kastaba ha ahaatee, Silva, oo galaya sannadkiisii labaad ee Chelsea kaddib markii uu kaga soo biiray PSG xilli ciyaareedkii hore, ayaa qirtay in inkastoo uusan wax dhibaato ah u heynin Ramos, haddan uu aad uga xumaaday in kooxdiisii hore ay lasoo wareegto xiddiga reer Spain marka loo eego adeegiisa dheer iyo inay isaga iska fasaxday.
“Waxba xumaato ah uma Sergio Ramos, laakiin Sergio, waqtigii ay usoo bandhigayeen qandaraas labo sano ah, wuxuu ila mid ahaa aniga sannadkii hore,” ayuu 36 jirkaan u sheegay ESPN Brazil.
“Markaa taasi waxay iga dhigtay runtii mid murugooda. Wali cidna kalama hadlin, maxaa yeelay runtii waxay iga dhigtay mid murugeysan, sababtoo ah waxaan dareemay inaanan kooxda waxba u qaban.
“Bixitaankeygu waa bog xaqiiqdii la rogay, laakiin isla mar ahaantaana aad ayaan uga fikiraa, wax badan ayaana ka tarjumaa wax walba oo dhacay, waxaan u malaynayaa in wax kale la sameeyn karay.”
“Sababtoo ah ma ahayn siddeed maalmood, ama siddeed bilood oo aan la qaatay PSG. Waxay ahayd siddeed sannadood oo guulo badan iyo shaqo badan oo aan PSG ku beddelnay soona gaarsiinay heerka ay maanta taagan tahay.”
“Waxaan doonayaa in PSG ay guuleysato, maxaa yeelay kooxda waxay u qalantaa ixtiraam dhan. Laakiin, marka la eego sida ay wax u dhaceen, waxaan dareemayaa murugadan waxaanan dareemayaa in si ka duwan loo samayn karay.”